Mahesh's world: के तपाईँलाइ थाहा छ?
के तपाईँलाइ थाहा छ?
आजकाल च्याटमा बस्दा होस या फेसबुक लगायत का नेटवर्किङ साइटमा होस Internet Acronyms
अर्थात सब्द लाइ छोटो बनाएर प्रयोग गरिने कोड को प्रयोग असाध्यै बढेको छ। लामा लामा शब्द प्रयोग गर्न बाट मुक्त हुने तथा आफ्नो सर्कलमा मात्र प्रयोग हुने यस्ता Internet Acronyms हरु युबापुस्तामा अझै लोकपृय बनेका छन। के तपाइँ पनि यस्ता Internet Acronyms
प्रयोग गर्नुहुन्छ? कि अर्थ नबुझेर अक्क न बक्क पर्नुभएको छ? त्यसोभए केही लोकप्रिय Internet Acronyms
हरु म तपाईँसमक्ष राख्दै छु
2NITE TO NIGHT
9 PARENTS ARE WATCHING
99 PARENTS GONE
<3 as="as" asap="asap" b4n="b4n" bc="bc" because="because" bibi="bibi" bye="bye" byebye="byebye" disturb="disturb" div="div" dnd="dnd" do="do" end="end" eol="eol" for="for" heart="heart" it="it" laugh="laugh" life="life" lol="lol" loud="loud" love="love" not="not" now="now" of="of" possible="possible" soon="soon">